नेकपाले सिमानामा लगाएको काँडेतार प्रहरीले रातारात किन हटायो ? यसो भन्छन चितवनका डिएसपी — Sanchar Kendra
नेकपाले सिमानामा लगाएको काँडेतार प्रहरीले रातारात किन हटायो ? यसो भन्छन चितवनका डिएसपी
प्रतिमा रेग्मी, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सिमाना बचाउनका लागि लिएको पहलकदमी ओली सरकारलाई स्वीकार्य हुन् सकेन । मंगलबार चितवनको माडी नगरपालिका वडा न ५ स्थित मरचरीकुटीमा रहेको नाचनचरीको पिलर नम्बर ४५२- ४५ नजिक विगतमा भारतद्वारा कब्जा गरिएको नेपाली भू-भागमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन अखिल (क्रान्तिकारी)ले काँडेतार लगायो ।
काँडेतार लगाएको खबर एकैछिनमा भाइरल बन्यो । सिमानामा भारतले देखाउदै आएको दादागिरीको बिरुद्ध एकशब्द बोल्न नसक्ने सरकारलाइ सिमाना जोगाउन नेकपाले सुरु गरेको ‘सीमा बचाऔँ अभियान !’ पाच्य हुनसकेन ।
बारम्बार आफ्नो सिमा अतिक्रमण हुँदा समेत त्यसलाई रोक्न कुनै नीति बनाउन नसकेको सरकारलाई अखिल क्रान्तिकारीले काँडेतारको ३० मिटर लामो बारलाई चुनौतीका रुपमा लियो । फलस्वरुप बुधबार नै नेपाल प्रहरी लगाएर उक्त काँडेतार हटाउन लगाइयो ।
यसविषयमा बुझ्न खोज्दा माथिबाट निर्देशन आएकाले आफूहरुले तारबार हटाउनु परेको इलाका प्रहरी कार्यालय माडीले संचारकेन्द्रलाई बतायो । ‘त्यहाँ सिमानामा काँडेतार लगाएको खबर आएको छ । गएर तत्काल हटाउ भनेर माथिबाट आदेश आएर हटाइएको हो ।’ इलाका प्रहरी कार्यालय माडीका एक प्रहरी जवानले संचारकेन्द्रसँग टेलिफोनमा भने- ‘यहाँको प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सर घर जानुभएको छ । हामीलाई अरु कुरा केहि थाहा छैन जिल्लामा बुझ्नुहोला।’
यस विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी दिपेन्द्र शाहसँग बुझ्दा उनले पनि माथिकै आदेशमा काँडेतार हटाइएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने- जुन ठाउँमा काँडेतार राखिएको थियो त्यो भारतले अतिक्रमण गरेको या हडपेको जमिन होइन । त्यो नेपाली भूमि हो र नेपालमै पर्छ ।
क्रान्तिकारीले दशगजा क्षेत्रमा नभइ नेपाली भूमिमै काँडेतार लगाएर आफ्नो पार्टी, सङ्गठन र नेपालको झण्डा गाडेकोले छिमेकीलाई जिस्क्याएजस्तो भएको उनले बताए । उनले भने- ‘त्यो दशगाजा क्षेत्रमा पनि होइन, नेपालमै हो । १५ मिटरजति काँडेतार थियो । क्रान्तिकारी र नेपालको झन्डा पनि रैछ । यो त् छिमेकीलाई जिस्काएजस्तो भयो । कित मिचिएको भूमिमै गएर झण्डा गाडेको भए हुन्थ्यो ?’
काँडेतार लगाएको र झण्डा गाडेको सूचना आएपछि मंगलबार राती नै गएर प्रहरी सबै निकालेर फालेको उनले बताए । तर त्यहाँ आसपासका स्थानीयले भने क्रान्तिकारीले सिमानामा काँडेतार लगाएर ठिक गरेको बताएका छन् । सिमानामा भारतीय पक्षको ज्यादती सहने स्थानीय जनता भएको भन्दै प्रहरीले तारबार लगाउनुको साटो उखेर फालेकोप्रति दुख व्यक्त गरे ।
यता क्रान्तिकारीले भने भारतले आफूद्वारा मिचिएको जमिन फिर्ता नगरेसम्म आफ्नो सीमा बचाऔँ अभियान चलिरहने बताएको छ । भारतसँग डराएर आफ्नो सिमाना जोगाउन नेकपाले थालेको अभियानमाथि निस्तेज लगाउन खोजेको उसले आरोप लगाएको छ ।
भारतले मिचेको ७८ हजार हेक्टर जमिन फिर्ताका लागी दबाबस्वरुप काँडेतार लगाइएको क्रान्तिकारीका अध्यक्ष चिरन्जीवी ढकालले बताए । ‘नेपालको ७१ ठाउँमा भूमी मिचिएको छ, मिचिएको भूमी फिर्ता हुनुपर्छ ।’ उनले भने- ‘मिचिएका अन्यत्र सीमा मिचिएको ठाउँमा काँडेतार लगाउँछौं, ७८ हजारभन्दा भूमि फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहन्छ ।’
सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो भारतले जङ्गेपिलर नेपालभित्र सारेर मात्र नभएर कोसी, गण्डक नहर निर्माण गर्दा र महाकाली सन्धि गर्दासमेत नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गर्दै आएको छ । त्यसैगरी नेपालको भूभाग कालापानीमा दसकौँदेखि भारतीय सेनाले क्याम्प खडा गरेको छ । सन् २०१५ (२०७२ साल) मा मात्र नेपालको भूमि लिपुलेक भारतले आफ्नो भनी चीनसँग सम्झौता गरेको छ । यसका बारेमा चौतर्फी विरोध भएपछि चीन सम्झौताका बारेमा पुनर्विचार गर्न तयार हुँदा पनि नेपाल सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन ।